Caruuraha ajaanibta oo natiijada waxbarashadoodu hooseeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Caruuraha ajaanibta oo natiijada waxbarashadoodu hooseeyo
La daabacay tisdag 6 december 2016 kl 11.08
Abdirisaaq Xussein:" Caruuraha waddanka cusub ayey dhibta ugu badani haysa"
Baadhitaanka ururka Pisa oo muujinaya in natiijada caruuraha ajaanibta hoos u degtay. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Natiijada caruuraha ajaanibta ah ee iskuulka dhexe dhigta ayaa hooseeysa. Sidaas ayuu sheegay baadhitaanka sanadlaha ee ururka Pisa.
Dhanka kale ayaa horumar laga arkay ardayda asal ahaan waddanka u dhashay. Kuwan ayaa kor u qaaday natiijada madooyinka xisaabta iyo fahanka akhriska. Sidaas ayuu muujinaya baadhitaanka sanadlaha ee ururka Pisa.
Tan ayaa ka dhigan in ardayda asal ahaan waddanka u dhashay kor u kiciyeen natiijadooda marka la barbardhigo baadhitaankii hore ee Pisa halka dhaleecayn xoog leh loo soo gudbiyay Iswiidhan ka dib markii la ogaaday in natijada ardayda da´da 15 ka hooseeysay badanka waddamada ka mid ah ururka isbahaysiga dhaqaalaha iyo horumarka ee loo gaabiyo OECD.
Baadhitaankan cusub ayaa sheegaya in ay Iswiidhan hadda gashay kaalinta 28:aad halkey ka ahaan jirtay 38:aad.
Hasayeeshe in kasta ay Iswiidhan kor u qaaday natiijadeeda weli waxaa hooseeysa natiijada caruuraha ajaanibta ah. Faraqa u dhaxeeya ardaydan iyo kuwa asal ahaan waddanka u dhashay ayaa korodhay kana hooseeysa badanka wadamadda ka qeeyb galay baadhitaankan.
Sido kale ayuu faraqa u dhaxeeya caruuraha ugu calaamada sareeya iyo kuwa ugu hooseeya sii korodhay, boqolkii ba 27 ilaa iyo sannadkii 2006:kii.
Ururka Pisa ayaa saadaalinaya in ay waxbarashada iskuulada dhexe ee Iswiidhan shaqo faro badan u baahan tahay. Ururkan ayaa u jeeda in ay Iswiidhan qaabishay qaxooti faro badan oo u baahan wakhtii dheer inta natiijo laga arkii karo.
Waddanka Singapore ayaa sannadkan noqday waddanka ugu natijada waanaagsan 72:a waddan ee ka qeeyb galay baadhitaankan. Singapore waxaa ku xiga waddanka Japan, kaalinta saddexaad waxaa galay waddanka Estoonia.